Waa maxay Coronavirus iyo sidee loo kala qaadaa? | RayHaber | raillynews
HomeGUUDWaa maxay Coronavirus iyo sidee loo kala qaadaa?
11 / 03 / 2020 GUUD, TURKEY, VIDEOS
Waa maxay coronavirus
Coronavirus (Coronavirus) waxaa markii ugu horreysay lagu arkay 29 qof oo ka shaqeynayay suuq iibinaya hilibka badda iyo xayawaanka ku nool Wuhan, Shiinaha, Disember 2019, 4, dad badan oo booqday suuqan isla maalintaas ayaa isbitaal loo dhigay isla cabashooyinkaas oo kale. Natiijadii ka soo baxday baadhitaannadii shaybaarka laga qaaday bukaannada, waxa la muujiyay in fayraska keenaya cudurka loo fahmay inay ka yimaadeen qoyska fayraska SARS iyo MERS. Bishii Janaayo 7deeda, Ururka Caafimaadka Adduunka wuxuu ku dhawaaqay magaca cudurka faafitaanka cusub inuu yahay "New Coronavirus 2019 (2019-nCoV)". Kadib fayraska waxaa loo magacaabay Kovid-19 (Covid-19).
Coronaviruses waa qoys ballaaran oo fayras ah oo ku dhici kara aadanaha oo waxaa lagu ogaan karaa noocyada xayawaannada qaarkood (bisad, geel, dufcad). Coronaviruses-ka ku dhex wareega xayawaanku wuu is beddeli karaa waqti ka dib wuxuuna heli karaa awood uu ku qaado cudurka aadanaha, isagoo markaa bilaabay inuu arko ifafaale aadanaha. Si kastaba ha noqotee, fayrasyadan ayaa khatar geliya aadanaha ka dib markay heleen awood ay ku kala gudbiyaan qof ilaa qof. Kovid-19 waa fayras ka soo muuqday dadka soo booqda magaalada Wuhan, wuxuuna helay awood lagu kala qaado qof ilaa qof.
SIDEE AYEY CORONAVIRUS KELIYA?
Coronavirus-ka cusub, sida coronaviruses kale, ayaa loo maleynayaa inuu ku faafayo dheecaanka neefsashada. Dheecaanka dheecaanka dheecaanka ee ay ku jiraan qufaca, hindhisada, qosolka, iyo fayras ku faafa deegaanka inta lagu gudajiro hadalka, waxay xiriir la yeeshaan xuubka xuubka ee dadka caafimad qaba oo xanuunsada. Xiriir dhow (in kabadan 1 mitir) ayaa loo baahan yahay si cudurku ugu faafo qof ilaa qof sidaan. In kasta oo natiijooyinka la helay ay ka mid yihiin horumarka cudur ee dadka aan weligood tagin suuqa xayawaanka oo u bukooday xanuun ka dhashay la xiriirista bukaanka, adeegaha caafimaadku wali lama yaqaan inta uu gaarsiisan yahay faafitaanka cudurka 2019-nCoV. Arrinta ugu muhiimsan ee go’aamisa sida cudurka u faafayo waa sida ugu fududa ee fayraska loogu kala qaado qof ka qof iyo sida loogu guuleysto in loo qaado tillaabooyinka lagama maarmaanka ah. Marka la eego macluumaadka maanta, waxaa la dhihi karaa 2019-nCoV kuma wasakheysan cunnada (hilibka, caanaha, ukunta, iwm).
Waa maxay nidaamka gorgortanka?
Maanta taariikhda: 11 Maarso 1930